Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.5.4 Enable kushamisika
Privacy &amp; Usatenda
1.1 An ingi achasvibiswa
1.2 Tinokugamuchira digitaalinen zera
1.4 Themes bhuku rino
1.5 Tsanangudzo yebhuku rino
Zvaunofanira kuverenga zvinotevera
2 Kucherechedza maitiro
2.2 date Big
2.3 Gumi zvine maitiro anozivikanwa makuru makuru
2.3.2 Nguva dzose
2.4 Research nzira
2.4.1 Counting zvinhu
2.4.2 kufungidzira uye nowcasting
2.4.3 Approximating kuedza
3 Kubvunza mibvunzo
3.2 Kubvunza maererano nekucherechedza
3.3 Vose Ongororo kukanganisa framework
3.4 Ndianiko kubvunza
3.5 New nzira kubvunza mibvunzo
3.5.1 Ecological chinguva mazano
3.5.2 Wiki kuongorora
3.6 Ongororo dzinobatanidzwa kune makuru makuru emvura
3.6.1 Kubudirira kubvunza
3.6.2 Amplified kubvunza
4 Running kuedza
4.2 Ndezvipi kuedza?
4.3 Two kukura kuedza: yezvirwere-munda uye analoginen-digitaalinen
4.4 Kufambira mberi nyore kuedza
4.4.2 Heterogeneity kurapwa nemigumisiro
4.4.3 Nzira dzinoshandiswa
4.5 Kuita zvichiitika
4.5.1 Shandisa nzvimbo dziripo
4.5.2 Zvivakire iwe pachako
4.5.3 Zvivakire chigadzirwa chako
4.5.4 nevane simba
4.6.1 Create razero shanduka mari Data
4.6.2 maitiro mumugadziro wako: shandura, kuchenesa, uye kuderedza
5 Kugadzira kubatana kukuru
5.2.2 Crowd-Coding enyika manifestos
5.3 Open zvinoda
5.4 Kuparadzirwa date muunganidzwa
5.5 pamasikiro kwako
5.5.1 Kukurudzirana vechikamu
5.5.2 zvireruke heterogeneity
5.5.3 Focus nzeve
5.5.4 Enable kushamisika
5.5.5 Iva anekutita
5.5.6 Purani zano
6.2 mienzaniso mitatu
6.2.2 Kunakidzwa, Zvisungo, uye Nguva
6.3 Digital rakasiyana
6.4 Four zvinotaurwa
6.4.1 Kuremekedza Persons
6.4.4 Kuremekedza Mutemo uye Public Interest
6.5 Two zveupfumi yetsika
6.6 Areas yakaoma
6.6.2 Understanding uye Kugadzirisa informational ngozi
6.6.4 tichisarudza mukutarisana chokwadi
6.7 Practical Mazano
6.7.1 The IRB ari uriri, kwete siringi
6.7.2 Zviise vose kuti shangu
6.7.3 Funga kutsvakurudza tsika sezvo chinoenderera, kwete discrete
7 The ramangwana
7.1 Kutarisa mberi
7.2 Nheyo dzenguva yemberi
7.2.1 Kubatanidzwa kwevakagadzirira uye vakachengetedza
7.2.2 mukwikwidzi zvakatinakira date muunganidzwa
7.2.3 Ethics pakutsvakurudza magadzirirwo
7.3 Back to pakutanga
Shanduro iyi akasikwa kombiyuta. ×
Iye zvino kuti iwe une vanhu vanokanganisa pamwe chete vachishanda pamwe chete pane chinetso chesayenzi chinogutsa, uye iwe unofunga nezvekutarisa kwainogona kuva yakakosha zvikuru, iva nechokwadi chekusiya nzvimbo yavo kuti vashamise iwe. Zvakanaka chaizvo kuti vagari venyika vasayendisiti vakanyora magaraxi paGalaxy Zoo uye vakapeta mapuroteni kuFoldit. Asi, hongu, ndizvo izvozvi zvigadzirwa zvakagadzirirwa kuti zvibatsire. Chimwe chinotonyanya kushamisa, maonero angu, ndechekuti idzi dzinharaunda dzakabudisa zvesayenzi zvisingatarisirwi kunyange nevakasika. Semuenzaniso, mharaunda yeGalaxy Zoo yakawana kirasi itsva yechinhu chenyeredzi iyo yaidaidza "Green Peas."
Pakuvamba mumushandi weGalaxy Zoo, vanhu vashomanana vakanga vacherechedza zvinhu zvisingawanzovi zvisikwa, asi kufarira kwavari kwakanyatsogadzirwa apo Hanny van Arkel, mudzidzisi wechikoro cheDutch, akatanga mutambo muhurukuro yekukurukurirana yeGalaxy Zoo nehurukuro inobata musoro: "Ipa Peas Chance. "Utambo, hwakatanga musi waAugust 12, 2007, hwakatanga nemajokes:" Uri kuvaunganidza kuti vadye ?, "" Peas stop, "nezvimwe zvakadaro. Asi rakanaka munguva pfupi, vamwe veZoo vakatanga kutumira mapepa avo. Nokufamba kwenguva zvivako zvakava zvinyorwa zvepamusoro uye zvakadzama, kusvikira zvipfeko zvakadai zvakatanga kutaridzika: "OIII line ('pea' line, pa5007 angstrom) kuti uri kutevera mashizha kune zvitsvuku sezvo \_(z\_) inowedzera uye inopera kusvika ku-infra-red pamusoro pe \_(z = 0.5\_) , kureva kuti haioneki " (Nielsen 2012) .
Nokufamba kwenguva, vaZooite vakanga vachinzwisisa zvishoma nezvishoma uye vachigadzirisa maonero avo emaperesi. Pakupedzisira, musi waJuly 8, 2008-gore rose rakazotevera-Carolin Cardamone, mudzidzi wechikoro chekuongorora nyeredzi kuYale uye nhengo yeboka reGalaxy Zoo, akabatana ne thread kuti abatsire kuronga "Pea Hunt." Basa rakawanda rakawedzerwa rakatevera uye munaJuly 9, 2009 pepa raive rakabudiswa mumwedzi weNewly Notices weRoyal Astronomical Society rine musoro unoti "Galaxy Zoo Green Peas: Kuwana Chikamu Chenguva Dzakawanda Nyeredzi-Kuumba Garaxies" (Cardamone et al. 2009) . Asi kufarira kune peas haina kuguma ipapo. Nokudaro, vave vari nyaya yekutsvakurudza mberi kwevadzidzi vezvidzidzo pasi rose (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Zvadaro, muna 2016, makore anopfuura gumi mushure mokutanga kweposita neZoite, pepa rakabudiswa muChimiro rakaronga Green Peas sechinhu chinogona kujekesa kwekukosha uye kukanganisa maitiro mu ionization yezvose. Hapana chimwe cheizvi chakanga chichifungidzira apo Kevin Schawinski naChris Lintott vatanga kukurukura Galaxy Zoo mumusangano muOxford. Nenzira yakanaka, Galaxy Zoo yakaita kuti izvi zvive zvinoshamisa zvisingatarisirwi nokubvumira vatori vechikamu kuti vataurirane.